Pixelmator Pro waxaa lagu cusbooneysiiyay dalagyo cusub iyo shaqooyinka hagaajinta cilladaha | Waxaan ka socdaa mac
Pixelmator Pro waxaa lagu cusbooneysiiyay abuurka abuurka cusub iyo astaamaha qalajinta
Javier Porcar | | Mac App Store, Noticias
Pixelmator Pro wuxuu helayaa casriyeyntii ugu horreysay maanta. Codsiga oo la sii daayay Noofambar 29, wuxuu helayaa cusbooneysiinta ugu horreysa ee lagu daro qayb weyn oo ka mid ah quudinta-soo-celinta ee dadka isticmaala soo sheegaan. Inta badan, waxay diirada saartay ku darida howlaha cusub ee jarista iyo saxida khaladaadka caadiga u ah codsi cusub.
Xusuusnow in Pixelmator Pro uu yahay codsi cusub, oo loogu talagalay suuq xirfad leh. Soosaarayaasha barnaamijka waxay ku hayaan noocii hore Apple Store. Pixelmator wuxuu ku habboon yahay dadka isticmaala badankoodna nooca pro-ka ah ayaa loogu talagalay, marka lagu daro xirfadlayaal, oo doonaya inay "tuujiyaan" sawir kasta.
Cusboonaysiinta waxaa lagu kabayaa hagaajinta qalabka xulashada iyo qoraalka. Waxaa jiray sheegasho weyn oo ka timid isticmaaleyaasha, maxaa yeelay dhammaan howlihii lagu xayeysiiyay mareegtada, laguma darin nooca 1.0. Horumariyayaashu way ogyihiin tan, wax yarna waxay ku darayaan dhammaan shaqooyinka ballanqaadka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan fahansanahay raaxo la'aanta isticmaaleyaasha markay bixinayaan wax ka badan 60 euro oo aan helin dhammaan faa'iidooyinka.
Cusboonaysiintaan cusub, waxaan u tagi karnaa saamiyada dhinaca caadada ah oo aan u keydin karno sidii hawl horay loo qabtay. Doorashadan ayaa ah mid aad muhiim ugu ah kuwa hagaajiya sawirrada maalin kasta, sida ay tahay dadka ku qora bog internet. Isku hagaajinta sawirada ayaa si toos ah u soo gaabinaysa shaqadan waxbadan.
Hawlaha kale taas oo lagu hagaajinayo cusbooneysiinta Janaayo 22:
Horumarinta tayada lakabyada qoraalka.
Isqurxinta qoraalka ayaa ka dhakhso badan iyada oo loo marayo interface ka.
Waad ceshan kartaa baarka bannaan si aad udhaqaajiso xulashada, adoo isticmaalaya qalabka xulashada qaabdhismeedka iyo Elliptical.
Tani waa dulmar yar oo ka mid ah in kabadan 30 isbedel iyo hagaajinta ay keeneen cusbooneysiinta tifaftiraha muuqaalka, runta ah ee Mac oo doonaya in ay wax ku adkaadaan Photoshop-ka weyn.
Waxaad ka soo dejisan kartaa cusbooneysiinta Mac App Store qiimo dhan € 64,99 ama cusbooneysiin nooca 1.0.6 haddii aad iibsatay arjiga toddobaadyo ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Pixelmator Pro waxaa lagu cusbooneysiiyay abuurka abuurka cusub iyo astaamaha qalajinta
Xiaomi wuxuu ku adkeysanayaa inuu u ekaado MacBookga Apple oo leh Mi Notebook Air
Kani waa kormeeraha cusub ee LG ee xalka 4k